निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै प्रदर्शन, निर्दोषलाई यातना ! दोषीलाई उन्मुक्ति ? - निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै प्रदर्शन, निर्दोषलाई यातना ! दोषीलाई उन्मुक्ति ?
निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै प्रदर्शन, निर्दोषलाई यातना ! दोषीलाई उन्मुक्ति ?
२०७५, ३० भदौ, 09:04:31 AM
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै शनिबार काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ नाम दिइएको प्रदर्शन माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको हो ।
प्रदर्शनमा स्वस्फुर्त रुपमा सयौं सहभागी भएका छन् । निर्मलाका निम्ति न्याय, निर्दोषलाई यातना, दोषीलाई उन्मुक्ति ? लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए । प्रा डा गोविन्द केसी लगायतका सहभागी भएका थिए । केसीले निर्दोषलाई यातना, दोषीलाई उन्मुक्ति प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ माग्दै शनिबार देशकमा विभिन्न १९ स्थानमा जनभेला भएको छ ।बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै नारा लगाउँदै प्रदर्शन भइरहको बेला निर्मलाका बाबु र आमा समेत सहभागी भएका थिए ।
निर्मला हत्या प्रकरण: एसपी विष्टसहित ८ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर
निर्मलाका बुबाआमाले भक्कानिदै भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरी सम्झेर न्याय दिनुस्’